धेरै पिरो खान किन मन लाग्छ ? - Narayanionline.com
काठमाडौँ, फागुन १-
लाखौं मानिस पिरो खानेकुरा खान्छन् । जसका कारण उनीहरुको जिब्रो पनि पोल्न थाल्छ । जब पिरो खानाले त्यस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन भने पिरो किन खानु ?
खुर्सानी धेरै प्रयोग हुने देशहरुमा थाइलेन्ड, फिलिपिन्स, भारत र मलेसिया जस्ता देशहरुको नाम अगाडि आउँछ । त्यस्तै स्वीडेन, फिनल्यान्ड र नर्वे जस्ता देशहरुमा खुर्सानी सबैभन्दा कम प्रयोग गरिन्छ ।
ती वैज्ञानिकका अनुसार खानेकुरालाई हामी सुकाउने, नुन अथवा मसला लगाउने जस्ता कुरा गरेर किटाणुहरुबाट बचाउने कोसिस गर्छौं । किटाणुहरुले पनि हामीले खाने खानेकुरा नै खान मन पराउँछन् । त्यसैले खानालाई विभिन्न तरिकाले सुरक्षित पारेर हामी स्वयंलाई फुड पोइजनिङ हुनबाट बचाउँछौं । टर्की खुर्सानी उत्पादन गर्ने एउटा ठुलो देश हो र त्यहाँ यसको खपत पनि धेरै हुन्छ ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको भन्दै नारायणगढमा नेविसंघको विरोध प्रदर्शन
दर्शको चाप बढेपछि नारायणी महोत्सव पाँच दिन थपियो